Wava Nemoyo Mumwe. Zvidzivirire nePrairie!
Bhizinesi redu moyo asi simba redu vanhu vedu. Uye hapana munhu ane hunyowani uye akazvipira kukupa iwe-yepasi-yepamusoro moyo uye vascular hanya kupfuura shamwari dzako kuPrairie.
Prairie inopa yakasarudzika zvirongwa uye marapirwo kuti ave nechokwadi chekuti murwere wese anogamuchira yemhando yepamusoro moyo uye vascular care. Neyedu yakasarudzika timu-yakavakirwa modhi, varwere vePrairie vanopihwa kutarisirwa kunodarika mwero yenyika apo vachipa hurongwa hwakagadziridzwa kuti hukwane zvinodiwa nemurwere wega wega.
Chinangwa cheKuona iwe mu7 chirongwa ndechekuona kuti tiri kudzidzisa uye kutevera varwere vane moyo stents mukati memazuva manomwe ekubuda. Zvidzidzo zvinoratidza varwere vanoonekwa nanamukoti mushandi mukati memazuva manomwe ekubuda kubva kumoyo stent vane mhedzisiro iri nani. Isu tinotarisa padzidzo yemishonga (DAPT, nitro etc), mirairo yebasa, kunyoresa muCardiac rehab, kurega kusvuta, chirongwa chekurapa kwese mushure me stent uye kuongororwa kweCAD. Kana murwere achinge akarongerwa PCI isu tinoita kuti varongerwe kushanya kwekiriniki nemukoti anoshanda. Isu tinoedza kutumira murwere wese kumba ne Toonana muna 7 kadhi rine zuva rekugadzwa rinotevera uye nguva pamwe chete nemirayiridzo yemishonga.
Yedu Yedu Yakapupurirwa Chirongwa CheZvibuda Zvirinani
7 Zuva Kutevera
Ronga Kugadzwa Kwako Zvino!
Wana Chiremba Wako Zvino!
Iyo yakawanda yakazara Chest Pain Network muIllinois inobatanidza zvipatara uye emunharaunda EMS masangano kuburikidza neyedu chete Prairie Heart Institute yeIllinois Chest Pain Network system. Kana murwere asvika mukamuri rekukurumidzira, nhevedzano yakanyatsorongeka yezviitiko nemaprotocol zvinotanga kuongororwa nekukurumidza uye kurapwa kwevarwere vemoyo.
Kuongorora kwakakodzera kwevarwere vechipfuva zvichienderana neprotocol yakagadzirwa naPrairie Heart.
Kuita inishuwarenzi kurwadziwa kwechipfuva kunopihwa pekutanga kunharaunda Emergency department nekupa EKG yekukurumidza.
Nzira yakazara inotangira kubva pakufambisa kwekukurumidza uye kupindira kune kutarisa kwenzvimbo uye kubudiswa.
Dzidzo yemurwere & yenharaunda kuziva & kuita kune kurwadziwa kwechipfuva, uye kupa dzidziso pamusoro pezvichangoburwa zvekuongorora & kurapwa sarudzo.
Sei Chest Pain Network?
Kunyange zvazvo kurwadziwa kwechipfuva ndechimwe chezvichemo zvinowanzoitika kune varwere vanouya kune dhipatimendi rekukurumidzira, chete 10-15 muzana yevarwere vane kurwadziwa kwepfupa vane chirwere chemoyo. Chimwe chezvinangwa zveChest Pain Network ndechekuderedza zvakanyanya nguva inotora kuti uone chikonzero chekurwadziwa kwepfuva iyo inoderedza nguva yekurapa panguva dzakaoma dzekutanga, apo kurapwa kunonyanya kushanda.
Kutsunga nekukurumidza, pasina kutya kana kunyara, kwechikonzero chekurwadziwa kwechipfuva uchishandisa Prairie Heart Protocols.
Zvose zvinogoneka kurapwa uye kutevera kunopihwa munharaunda.
Maitiro akagadziridzwa ekuendesa kune yakasarudzika nzvimbo kana zvichidikanwa.
Kana kuchinjisa kuchidikanwa, pakiti yeruzivo rwenhengo dzemhuri ine mavhocha echikafu uye rubatsiro rwekuziva pekugara kana zvichidikanwa.
Kurongeka kwekutarisira nachiremba wako wega.
Benefits KuChipatara cheCommunity
Prairie Mwoyo yakazara maprotocol ayo anogadzirisa zvese zvinongedzo zvekuchengetedza moyo zvinosanganisira STEMI, nSTEMI, Observation uye Inpatient care.
Kuwedzerwa kugona kuchengetedza varwere vakakodzera munharaunda uye kubvisa kutamiswa kusina kufanira.
Kukurukurirana kweRN kubva kuPrairie Heart Institute yeIllinois kubatsira nedzidzo yekutanga uye kuita mapuroteni pamwe nerubatsiro rwekupa nharaunda uye dzidzo yehunyanzvi.
Chengeta Pedyo Nemba Yako
Takakomborerwa kugara munharaunda ine nharaunda dzakasimba umo tinonzwa takasununguka uye kugutsikana. Asi kana tine dambudziko remwoyo ringada kutarisirwa kwakadzama, zvinowanzoreva kuti takatarisana nesarudzo yekusiya nharaunda yedu kana kuti zvakatoipisisa, kurega kutarisira. Izvi hazvisizvo kana kutarisirwa kwako kwakasarudzika kunopihwa neVanachiremba vePrairie cardiologists. Huzivi hwedu kuPrairie Heart Institute ndeyekuunza kutarisirwa kwakanyanya sezvinobvira munharaunda. Kana izvo zvisingaiti, ipapo uye chete ipapo, kufamba kunokurudzirwa.
Tsvaga Chiremba uye APC Pedyo Newe
Pamusoro penzvimbo dzinosvika makumi mana dzakatenderedza Illinois uko Prairie cardiologists vanoona varwere munzvimbo yechipatara, kune zvirongwa zvehunyanzvi muSpringfield, O'Fallon, Carbondale, Decatur, Effingham neMattoon.
Hazvina mhosva kuti unogara kupi, Prairie anewe maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pasvondo, mazuva 24 pagore. Yedu STAT Heart timu inogara yakagadzirira kana iwe uine kurwadziwa kwechipfuva. Nekubatana nezvipatara zvenharaunda, Prairie iripo kuti ive nechokwadi chekuti unowana rubatsiro rwakafanira panzvimbo chaipo.
Kana murwere achitambura STEMI (ST-elevation myocardial infarction) - nzira inouraya zvikuru yechirwere chemoyo - kukurumidza, kutumirwa kusina musono kurapwa kwakakodzera kunogona kuita mutsauko wehupenyu-kana-rufu. Iyo Prairie STAT Mwoyo Chirongwa inobatsira zvipatara zvenharaunda kukwenenzvera kuedza kwavo kuponesa hupenyu.
Prairie Cardiovascular yakatanga kukurudzirwa kwePrairie STAT Heart Program muna August 2004 pasi pekutungamirirwa kwaDr. Frank Aguirre naDr. Frank Mikel. Iyo Prairie STAT Mwoyo Chirongwa yaive imwe yekutanga munyika kutarisa pakugadzirisa rubatsiro rwechimbichimbi kusangana nechinangwa chenyika chekupa angioplasty (isiri yekuvhiya nzira yekurapa inorwara tsinga) mukati me90 kusvika 120 maminetsi kubva pakusvika kwemurwere munharaunda. chipatara (chinowanzonzi nguva yegonhi-ku-bharumu). Izvi zvinovimbisa kuti murwere ari munharaunda yekumaruwa anogamuchira rubatsiro rwemoyo rwekukurumidza nekukurumidza kana nekukurumidza kupfuura varwere vari munzvimbo huru dzemaguta.
Kuvandudza mhedzisiro munharaunda yedu
Kiyi yePrairie STAT Mwoyo Chirongwa ndeye kurongeka kwakadzama kwezvinhu zvese zvekubuda kwekutarisira moyo. Protocols inopiwa kuzvipatara makumi matatu nenhatu zvinotora chikamu zvekumaruwa kuitira kukurumidza kukurumidza kuongororwa uye kurapwa kwe ST elevation myocardial infarction varwere. Chikwata ichi chinosanganisira nharaunda uye vanogamuchira vashandi vechipatara, vashandi vemhepo uye vepasi, zvikwata zvecath lab uye Prairie Cardiologists vanopa marapirwo akanyanya kuponesa hupenyu. Tiri kurapa yakaipisisa rudzi rwekurova kwemoyo sekunge kukuvara kwemoyo.
Zvipatara zvekumaruwa zvinoda kurapwa nekukurumidza kune varwere vavo vakabatana nePrairie Cardiovascular Consultants kuti vave chikamu chePrairie STAT Heart Program.
24/7 munharaunda Yenyu
Prairie STAT Mwoyo Varongi varipo munharaunda yako, parunhare, 24/7 kufambisa nekukurumidza, kukurumidza kutamiswa kwevose STAT Heart varwere.
Prairie STAT Heart Coordinators vanopa kudzidziswa nezve STAT Heart process kune ese Community Hospitals, EMS pasi uye nzvimbo dzekufambisa mhepo uye kugamuchira zvigadziriso uye kuenderera mberi kutaurirana. Iyo Prairie STAT Mwoyo Chirongwa chakabatana neSt. John's Chikoro cheNursing chechirongwa chekubvumidzwa.
Iyo Prairie STAT Mwoyo Mukoti inopa yakadzama STAT Mwoyo Chirevo pane yega STAT Mwoyo activation. Iyi mhinduro kuCommunity Hospitals, EMS uye Receiving Centers inovimbisa hutano, kutaurirana, matanho ekuvandudza maitiro uye zvakanakisisa migumisiro yevarwere.
PHII Clinical Zvirongwa
Iyo Prairie Rapid Read Network
Ita kuti mhinduro dzevarwere vako dziturikirwe naPrairie Cardiologist dzotumirwa kwauri mukati memaawa makumi mana nemasere kana pasi.
Iyo Prairie Rapid Read Network ndiyo yako yakachengeteka, yewebhu-yakavakirwa mhinduro kune yakavimbika uye nekukurumidza kududzira echocardiograms yako, echo uye yenyukireya kusagadzikana bvunzo uye vascular ultrasound maitiro. Gore rega rega, bvunzo dzinopfuura zviuru gumi dzinotumirwa kubva kunzvimbo makumi matatu nenhanhatu.
Miedzo uye mafaera anoendeswa zvisina mutsetse kune yedu yakachengeteka server. Kuchinjisa kunogona kusanganisira mifananidzo, zvimedu, ruzivo rwevanhu, zviyero, manotsi uye mamwe akakodzera data redhijitari.
Chikwata chePrairie yemoyo nyanzvi yemoyo inogona kuona nekududzira bvunzo kubva kune chero Prairie Mwoyo nzvimbo muIllinois.
Neauto-populating ongororo mapepa ekushanda, mishumo inogona kugadzirirwa zviri nyore, kuongororwa uye kupedzwa mumaminitsi mashoma.
Kana yangodudzirwa, mishumo inogovaniswa otomatiki kune vakasarudzwa vagashiri kuburikidza neemail, fax kana PDF kutumira.
Iyo Prairie Rapid Read Network inobatanidza zvakananga kune yako Dicom-inoenderana echo/nuclear midziyo uye inogadzira nzira yekuisa zvakananga zvidzidzo kuPrairie Cardiologist pakarepo mushure mekuongororwa. Chidzidzo ichi chinogona kuzodudzirwa naPrairie Cardiologist uye dudziro inotumirwa kwauri mukati memaawa makumi mana nemasere kana mashoma (MF).
Kuputsa kubva pazvipingamupinyi zvekuvhara-kumagumo, kudhura kwakanyanya, network network PACS, Prairie Rapid Read inopa isingadhuri, yakachengeteka uye inochinjika sisitimu. Iyo Prairie Rapid Read sevhisi inobatanidza zvisingaite mune chero iripo mafambiro ebasa uye inokwidziridza kugona kwako.
Kubvumirwa uye Kudzorera
Iyo Rapid Read Lab uye Technologies inotenderwa neICAEL. Medicare nevamwe vanobhadhara vanoita kunge vari kufamba vachienda kune chinodiwa chekubvumidzwa kwelab uye/kana sonographer kuitira kuti vakwanise kubhadharwa.
Sei Prairie Rapid Kuverenga
Isu tinonzwisisa zvinangwa zvevatinoshanda navo uye kushushikana kunokonzerwa neakawanda echinyakare ultrasound uye mifananidzo yekutarisira bvunzo masevhisi.
Inowedzera hunyanzvi nekubvisa yakawandisa data yekupinda uye inopa webhu inowanikwa centralized manejimendi system kune ako ese ekuongorora bvunzo nemishumo.
Prairie Rapid Read inokura nebasa rako nekugadzirisa kuwedzera (kana kudzikira) muvhoriyamu yako yebvunzo. Kana uchida rubatsiro pakusarudza hardware nemitengo, ingo taura nesu uye tinokupa rubatsiro rwaunoda.
Inovandudza kutaurirana nekubvumira kubatanidzwa zviri nyore kwevashandi vekurapa vemunharaunda uye vari kure mukuongororwa kwemurwere wako uye kuita chirongwa chekuchengeta.
Nekubvisa yako yazvino yekunyora uye mubhadharo wekutumira, uye DVD, VHS tepi uye maCD mari, pamwe nekusada hardware itsva kana inodhura IT yekutanga-mubhadharo, Prairie Rapid Read inopa inodhura inotsiva maitiro ako azvino.
Ruzivo rwako rwemurwere runochengetwa pane yakachengeteka uye yakavanzika server.
Prairie Rapid Read inopa nzira yechitatu bato kuongororwa kwehunyanzvi hwemhando yako.
Prairie Rapid Read yakasarudzika yekushuma kugona inogonesa kubvumidzwa kwelab uye kupihwa chiremba, uye kupa zuva nezuva, vhiki nevhiki uye pamwedzi manejimendi yekutonga.
Ndokumbira utibate kuti uwane rumwe ruzivo rwekutanga Rapid Read munharaunda yako.
Dzidza zvakawanda nezve marapirwo akasarudzika aPrairie
Bata isu kana uine mibvunzo nezve izvi kana mamwe akawanda akasiyana marapirwo anopihwa naPrairie.
Bata nesu nhasi